भुइँतहमा चुनावी राप- विचार - कान्तिपुर समाचार
एउटै दलका जनप्रतिनिधिहरूमध्ये पनि कतै राम्रो गर्ने देखिए, कतै कसैले चौपट्टै पारे तर टिकटमा बाजी मार्नेमा दुवै थरी परे । यस्तो अभ्यासले गर्दा भुइँतहमा शक्तिको अवतरण हुन गाह्रो छ ।
वैशाख १५, २०७९ चन्द्रकिशोर
भेडावालाले मानवीय जिज्ञासावश उसको चिन्ताको कारण सोध्यो । जवाफ आयो, ‘मेरो थैली यही कुवामा झरेको छ । त्यसमा चाँदीका पाँच सय सिक्का थिए ।
मेरो थैली कुवाबाट निकालिदियौ भने म तिमीलाई सय सिक्का दिन्छु ।’ भेडावालाले सोच्यो, ‘जब एउटा ढोका बन्द हुन्छ तब सयौं नयाँ ढोका खुल्छन् । यति सिक्कामा त मैले दसवटा नयाँ भेडा किन्न सक्छु ।…’ हत्तपत्त कपडा फुकालेर ऊ कुवाभित्र छिरिहाल्यो ।
बाहिर उभिइरहेको चिन्तातुर मान्छेचाहिँ भेडावालाका कपडा उठाएर भाग्यो । भेडा पनि उसैले चोराएको थियो । इदरिस शाहको किताब ‘द वे अफ द सुफी’ मा संकलित मौलाना जलालुद्दीन रुमीको कथा हो यो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको हावा चल्न थालेसँगै गाउँ देहातमा यस्तै कथाका भाव झल्किने गुनासाहरू सुन्न पाइन थालेका छन् । नेकपा एमालेका प्रमुख खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले निर्वाचन सार्ने खेल भएको आशंका गरे पनि समग्र परिस्थितिले नेपालको राजनीति निर्वाचन–उन्मुख भइरहेको देखाएको छ ।
हावादारी हल्लाबाट उत्पन्न अन्योल क्रमशः हट्दै गएको छ । विगतमा मूलधारबाट अलग रहेका दलहरू नेत्रविक्रम चन्द समूहलाई होस् वा सीके राउतको जनमत पार्टीलाई, जनतामै जान राम्रै दबाब परेको छ । आफूलाई राजनीतिको पण्डित ठान्नेदेखि चोक–गल्लीका गफाडीसम्म सबै चुनाव–चर्चामा व्यस्त हुन थालेका छन् ।
कुनै पनि निर्वाचनको सफलता विभिन्न विषयमा निर्भर गर्छ, तर सबैभन्दा प्रमुखचाहिँ यसले आम नागरिकबाट कत्तिको सहयोग र समर्थन पाउँछ भन्ने नै हो । यसका लागि राज्य र यसका सबै प्रतिनिधि, त्यसमा पनि विशेष गरी राजनीतिक दलको भूमिका अग्रणी हुन्छ । यस पटक कुनै पनि राजनीतिक शक्ति चुनावको बहिष्कारमा देखिएको छैन ।
संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति असहमति राख्दै यसलाई मान्दिनँ भन्ने धारणा राख्ने व्यक्ति वा समूहहरू आफ्ना कार्यसूचीसहित मतदान प्रक्रियामा जानुपर्ने राय धेरै सचेत नागरिकको छ । तोकिएकै मितिमा चुनाव हुने जनविश्वास पनि बढ्दै छ ।
स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल संवैधानिक प्रावधानहरूबाटै संयोजित भयो । पालिकाहरू पुरानो धङधङी छोडी नयाँ दिशातर्फ उन्मुख हुँदै छन् । भावी स्थानीय तहको रूपरेखा कस्तो होला ? हरेक नेपालीको दिमागमा अहिले यही प्रश्नले घर गरिरहेको छ । दोस्रो कार्यकालका लागि समयमै चुनाव हुनु आफैंमा ऐतिहासिक फड्को हो ।
चुनाव कसरी हुन्छ, त्यसबाटै स्थानीय तहको भावी चरित्र र चाल तय हुनेछ । अब पदासीन हुने ‘चेहरा’ ले पनि यसमा भूमिका खेल्नेछ । अबको पालिका बोर्डले स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यासबारे अन्तिम निर्णय गर्नेछ । तसर्थ भुइँमान्छेको सरकारलाई ‘चेहरा’ छनोटको प्रक्रियासँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
जुगौंदेखि एकात्मक तथा केन्द्रीकृत ढाँचामा सञ्चालित राज्य संरचनाले नेपाली जनतामा अशिक्षा, गरिबी, असमानता र सांस्कृतिक भेदभाव थोपर्‍यो । यसको अन्त्यका लागि अपनाउन लागिएको बहुतहको शासन प्रणाली प्रारम्भमा केही खर्चिलो देखिए पनि यसले भविष्यमा समग्र मुलुकको आर्थिक उन्नति सुनिश्चित गर्न सक्ने विश्वास टुसाएको छ । स्थानीय सरकारप्रति भुइँतहमा व्याप्त अपेक्षाले देख्दा, यसमा लाग्ने खर्चलाई धेरै महत्त्व दिनु आवश्यक नहोला ।
मुलुकका सबै जाति, वर्ग र क्षेत्रका विभिन्न पहिचान बोकेका समूहहरूको प्रतिनिधित्व र पहुँच हुन सक्ने स्थानीय सरकारले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बढी दिगो र प्रभावकारी बनाउन सक्छ । निर्वाचन आवधिक रूपमा आफैंमा संविधानको सफलता हो तर यसको सार्थकता भुइँमान्छेको जीवनमा बदलाव ल्याउन सक्नुमा छ । यसमा पहिलो कार्यकालले पुर्‍याएको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।
स्थानीय तहको प्रयोगको पहिलो चरणमा नेपाली समाजको आधारभूत संरचनामा युगान्तकारी परिवर्तन आइसकेको छ । नेपाली जनतामा परिवर्तनका संकेतहरूलाई बुझ्न सक्ने, सच्याउनैपर्ने पक्षलाई मनन गर्ने, सुधारका आयामहरूलाई तत्परतासाथ व्यक्त गर्न सक्ने असीमित क्षमताको पनि विकास भएको छ । अपेक्षित गोरेटोमा आफूलाई हिँडाउन सक्ने विलक्षण खुबी बढ्दै गएको छ । आम मानिसको जीवनमा लोकतन्त्रले अभूतपूर्व चेतना सञ्चार गरिदिएको छ ।
विगतमा केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीमाथि जनताले ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरे र राज्य सञ्चालनमा सामूहिक निर्णयको व्यवस्थाका लागि संघर्ष गरे । पुरानो ढाँचाको प्रशासनिक पद्धतिले आधुनिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आवश्यकताहरू ठम्याउन सक्ने कुरै थिएन । रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिकामा सुनियो, ‘प्रशासनलाई विकासका प्रविधिको रूपमा प्रयोग गर्नेभन्दा पुरानो पद्धति अनुरूप नै कज्याउने मनोवृत्ति नयाँ शासकहरूमा देखियो ।’
यतिखेर दलहरू गठबन्धनको राजनीतिमा रमाइरहेका छन् । तिनले लामो समयदेखि नेपालको केन्द्रीय शासन–प्रशासनमा रहेका मौलिक र आधारभूत कमजोरीहरू नसच्याएका कारण उत्पन्न भएको विसंगत अवस्था र स्थानीय तहमा लोकतन्त्रले ल्याएको चेतना, जागरण र अभिप्रेरणाबीच सन्तुलन हुनचाहिँ सकेन ।
बितेका वर्षहरूमा आम नागरिकले विकासका स्रोत–साधन र स्थानीय सरकारमा पहुँच बढाएपछि केन्द्रीय सत्ताको भूमिका सीमित हुनु स्वाभाविक थियो । तर तृणतहमा फेरिएको मानसलाई गठबन्धनका वास्तुकारहरूले ठम्याउन सकेनन् । आम नागरिकले मतदानमार्फत आफ्नो शक्ति र प्रभाव प्रयोग गर्ने आतुरता यसअघि कहिल्यै देखाएका थिएनन् ।
परिवृत्तमा फेरिएको मानसलाई दलहरूको केन्द्रीय नेतृत्वले बुझेर सच्याउनेभन्दा बढी उदासीनता र उपेक्षा देखाए यस पटक । विकेन्द्रित नागरिक चेतनाको प्रभावकारितालाई व्यापकता दिन दलहरूले कन्जुस्याइँ गरेको जनगुनासो छ । दलहरूले समीकरण र सहकार्यका नयाँनयाँ रणनीतिहरूको प्रयोग गरिरहेका छन्, जुन सान्दर्भिक नै छ ।
त्यो कसैलाई मन पर्न सक्छ, कसैलाई मन नपर्न सक्छ । जुनसुकै राष्ट्रको जीवनमा परिपक्वता ल्याउन र परिवर्तनको गतिलाई सिञ्चित गर्न निर्वाचनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर परिवर्तनका यी प्रवृत्तिहरूलाई राजनीतिक शक्तिहरूले सृजनात्मक दिशामा अग्रसर गराउन सक्नुपर्थ्यो । आजको नेपाल परम्परागत र आधुनिक मान्यताबीच संघर्ष र संक्रमणको चरणमा छ ।
यतिखेर दलहरूले गठबन्धनका नाममा उही बासी अनुहारहरू उभ्याएका छन् । दलविशेषको भागमा जुन निर्वाचन क्षेत्र परेको छ, त्यहाँ उसले जसलाई खडा गरिदियो त्यसलाई मौन रूपमा स्वीकार गरिएको छ । कतै निवर्तमान जनप्रतिनिधि पुरानो दललाई छाड्दै नयाँ दलबाट चुनावमा होमिएका छन् ।
दलहरूमा प्रत्याशी छनोटको कुनै निश्चित मापदण्ड देखिएन । पुरानालाई दोहोर्‍याउनु हुँदैन भन्ने छैन, पुराना सबै कमसल हुन्छन् भन्ने पनि होइन, तर पुरानालाई दोहोर्‍याउँदा उसको विगतको कार्य प्रभावबारे मतदातालाई बताउनैपर्छ । कसलाई किन उठाइयो ? कसलाई किन आफ्नो दलमा भित्र्याइयो र फेरि चुनावी मौका दिइयो ? कसैले चुनाव लड्नकै निम्ति छोटो अवधिमा एकभन्दा बढी दललाई समाए, कोही दलले टिकट नदिँदा स्वतन्त्र रूपमा लडे ।
चुनावमा निर्धारित योग्यता पुगेका जोसुकै नेपाली उठ्न सक्छन्, तर कसैले अचानक किन दलीय राजनीति छाड्छ ? के व्यक्तिविशेष स्थानीय तहमा निर्दलीयता हुनुपर्ने मान्यता राखेर स्वतन्त्र प्रत्याशी बनेको हो ? कुनै पनि दलले विगतका आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूको कामको व्यवस्थित लेखाजोखा राखेन, अनुगमन गरेन र परामर्श दिएन । एउटै दलका जनप्रतिनिधिहरूमध्ये पनि कतै राम्रो गर्ने देखिए, कतै कसैले चौपट्टै पारे तर टिकटमा बाजी मार्नेमा दुवै थरी परे । यस्तो अभ्यासले गर्दा भुइँतहमा शक्तिको अवतरण हुन गाह्रो छ । त्यसैले आम मतदातामा दलभन्दा ‘चेहरा’ प्रति आकर्षण देखिएको छ ।
कतै कथाको भेडावालाजस्तै मतदाताको प्रभुसत्तालाई चोर्ने अनुहारहरू बहुरूपिया बनेर खेतखलिहान, घरआँगनमा आएका त छैनन् भनेर सोधखोज बढेको छ । निवर्तमान मेयरलाई मात्र होइन, ‘छाया मेयर’ लाई समेत प्रश्न गर्नेहरू कम छैनन्, ‘तपाईंले पाँच वर्षमा के गर्नुभयो ?’
प्रकाशित : वैशाख १५, २०७९ ०७:४०
नेपाल–भारत सम्बन्ध बन्नु वा बिग्रनुमा काठमाडौं र दिल्लीबाट लिइने नीति तथा नियत जिम्मेवार छ, सीमावर्ती जनताहरु होइन
सीमा भन्नेबित्तिकै तनाव सम्झिइन्छ, तर यहाँ दशगजामै कतै कपर्दी त कतै क्रिकेट खेलिन्छ, यस्तोसीमा अन्यत्र छैन, सीमा सम्बन्धको अनुपम परिभाषा यहाँ रचिएको छ ।
वैशाख ७, २०७९ चन्द्रकिशोर
उज्यालो र अँध्यारो छ । इतिहासमा सबै कुरा लेखिएको छैन । लेखिने पनि छैन । लोक स्मृतिमा बाँचेको छ । बिर्सिंदै–सम्झिँदै कथ्यहरू हस्तान्तरित हुँदै आएका छन् । बाँसको हरेक हाँगो बाँसुरी बन्दैन । विगतका सबै पदचाप इतिहासमा अंकित हुँदैन । यस्तो पनि होइन, नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छेउछाउका बासिन्दाको सम्बन्धबारे कहने कोसिस भएन । भयो । तर उही मत्र्योस्काको जस्तै गुजुमुट्टिएका मूर्तिहरूमध्ये केही झिकिए, केही थन्किए ।
छिमेकी भारतीय राज्य बिहारका हिन्दी साहित्यकार रवीन्द्र भारतीले आफ्नो पुस्तक ‘नेपाल उर्फ लट्ठा पार की डायरी’मा सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपालको लोकतन्त्रका लागि गरिएको संघर्ष र त्यसमा भारतीय जनताले पुर्‍याएको सहयोगको चर्चा गरेका छन् । सात सालको क्रान्तिकालदेखि विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको प्रथम पुण्यतिथिसम्म लामो कालखण्ड समेटिएको यो किताबमा सीमावर्ती भारतीय सहर रक्सौल, अररिया, फारबिसगन्ज, पटना, पूर्णियादेखि बनारससम्मका असंख्य नाम, जो इतिहासको धूलोमा छोपिन पुगेका थिए, तिनको फेरि चर्चा गरेका छन् । यो पुस्तकले एक दस्ताबेजको रूप ग्रहण गरेको छ । नेपालका लागि ज्यान दिने र दिन आतुर ‘सामान्य’ भारतीयहरूको चर्चा भएको छ यसमा । साहित्यकार राजेन्द्र विमलले यसलाई नेपालीमा अनुवाद गरेका छन्— ‘रामहरखको नेपाल डायरी’ का रूपमा ।
सीमाञ्चलमा ‘क्रान्ति’ सम्बन्धको ऐना हो, यो पुस्तक । सीमाञ्चल सम्बन्धको आधार रोटी–बेटी मात्र छैन, क्रान्ति पनि छ । जनसम्बन्धको नयाँ भाष्य दिन नेपालको हनुमाननगर (हाल सप्तरी)मा गिरफ्तार भारतीय स्वतन्त्रता सेनानीहरू डा. राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायणहरूलाई स्थानीय बासिन्दाहरूले मुक्त गराएपछि रोटी–बेटीको साइनोसँगै क्रान्ति गाँसियो । ती भारतीय जनसेनानीहरू आफ्नो मुलुकलाई औपनिवेशिक साङ्लोबाट मुक्त गर्न संघर्षरत थिए । त्यसपछिका प्रत्येक आन्दोलनमा सीमावर्ती भारतीय जनको सहयोग रहँदै आएको छ । नेपालमा ज–जसले जुन आन्दोलन विशेषसँग विमति राख्छन्, तिनीहरू भारतीय जनको स्वाभाविक सलंग्नताप्रति आक्षेप लगाउन पुग्छन् ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा उपमा र अलंकारको जुन प्रकारको प्रयोग हुन्छ, त्यसमा सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको सम्बन्धले निर्देशित गरिरहेको हुन्छ । उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम यी नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय प्रदेश हुन् । यी प्रदेशका बासिन्दासँग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक, पर्यावरणीय, आर्थिक आधारमा परम्परादेखि सम्बन्ध निर्माण भएको हो । यस्तो पनि होइन कि, सम्बन्ध कुनै खास क्षेत्र वा समुदायसँग मात्र छ । यो त पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूमाझ अभिन्न छ ।
मैथिलीमा राजेन्द्र विमलको काव्यपंक्ति छ— ‘राजनीति अछि चनकल ऐना तै देखाइए काटल रूप/राजनीति नहि संस्कृति जल मे अपना के पहिचानी की ।’ आशय हो, राजनीतिको चर्किएको सिसामा टुक्रिएको रूप देखिए पनि सांस्कृतिक रूपमा एकरूपता छ, जहाँ भिन्न गर्न गाह्रो छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध बन्नु वा बिग्रनुमा काठमाडौं र दिल्लीबाट लिइने नीति र नियत जिम्मेवार छ, सीमावर्ती जनताहरू होइन । समयको निकै घामपानी खाएर पनि सीमाञ्चल सम्बन्धका कतिपय संकथन स्थायी प्रकृतिका छन् । त्यस्तैमा हो, रोटी–बेटी र क्रान्तिको सम्बन्ध ।
नेपाल–भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सीमालाई दशगजा भनिन्छ । तर जनजिब्रोमा यो बोर्डर, सिवान, सरहद, ओही पार– एही पार, एही पानी–ओही पानी, सरहद, पाया जस्ता अनेकौं उपमाले चिनिने–चिनाइने गरिन्छ । वारिपारिको सम्बन्ध खुला सीमाले गर्दा जोडिएको होइन, यो नाता त रगतको छ । उही कोसी, उही कमला, उही काली र कर्णालीको साइनो छ । यो साइनोको निरन्तरता यस्तो छ कि, शताब्दीयौंपूर्व राजनीतिक सीमारेखा कोरिए पनि सम्बन्धको सुवासमा कमी आएको छैन । यो यस्तो छिमेकीको सम्बन्ध हो, जहाँ आँगनमै सीमास्तम्भ ठडिएको छ ।
एकातिर मर्दा टाँसिएकै अर्को छिमेकी मलामी जान्छ । अर्कातिर बिहे हुँदा सहनाई बजाउन पारिबाट आउँछ । आगलागी होस् वा चक्रवात, त्यहाँ राहत लिएर पुग्न यता–उतातिरका बासिन्दालाई कुनै छेकबार छैन । कतिपय बेला राज्यभन्दा पहिला समाज आइपुग्छ, मलम लिएर । सीमाञ्चलको आफ्नै समाज जो छ । दैनिक रोजगारी, किनमेल, औषधोपचार वा सांस्कृतिक उत्सवमा सहभागी हुनेहरू असंख्य छन् । यसैले सीमाञ्चल सम्बन्धको स्वरूप निर्धारित गर्दछ । बोर्डर खुला छ, वारिपारि गर्न भिसा–पासपोर्टको आवश्यकता पर्दैन । उत्तराखण्डका साहित्यकार बुद्धिनाथ मिश्र भन्छन्, ‘दुइटैतिरका बासिन्दा यति सहज तरिकाले सीमा वारिपारि ओहोरदोहोर गरिरहेका हुन्छन्, जसरी कुनै किसानले खेतको आली नाघ्दै गरेको होस् ।’
उत्तराखण्डको धार्मिक–सांस्कृतिक पूर्णागिरिको यात्रा हाम्रै कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवको दर्शनबिना पूर्ण हुँदैन । मिथिला परिक्रमाको चक्र सीमापारिका केही स्थलबिना पूर्ण हुन सक्दैन । यस्ता अनेकौं मेला, यात्रा, अनुष्ठान एकअर्काका साझा पूरक हुन् । दशगजामै कतै कपर्दी त कतै क्रिकेट खेलिन्छ । यस्तो सीमा अन्यत्र छैन । सीमा भन्नेबित्तिकै तनाव यहाँ छैन । सीमा–सम्बन्धको अनुपम परिभाषा यहाँ रचिएको छ । नेपाल–भारत सीमा यस्तो हो, जहाँ प्रत्येक दिन नयाँ रामायण लेखिन्छ । यस्तै साझापनको बोध गर्दै बिहारका कवि विभूति आनन्द लेख्छन्, ‘हम नेपाल में छी/नेपाल हमरा में अछि/हमर रक्त–मज्जा, हमर सांस–निसांस/हमर सोच–अपसोच/सभमे नेपाल, ओकरे खाद– पानी ।’
आशय हो– मभित्र नेपाल छ । मेरो प्रत्येक सासमा नेपाल छ । मेरो चिन्तनधारामा नेपाल समाहित छ । कविको यस काव्यपंक्तिले एकअर्काबीचको पारस्परिक दिनचर्यालाई दर्शाउँछ । अर्का बिहारी कवि हरिन्द्र हिमकरको अभिव्यक्ति छ, ‘स्वर्ण, रजत, हीरा, मोती से चमक रहा है भाल/एक कोख के जुडवे भाइ, भारत और नेपाल/यहाँ लगे जो आग सहोदर पानी भर देता है/उसका हो दुःख दर्द दौड यह पीडा हर लेता है/झुम–झुम इस के मंगल में वह नर्तन करता है/उसके सुर में सुर भरकर यह संकीर्तन करता है/दोनों के सर दोनोंका चन्दन है, अभिनन्दन है/अञ्चलका यह भाव अनुठा, अमिट स्नेह बन्धन है ।’
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्र–राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र कूटनीतिको प्रभाव पर्छ । दिल्ली र काठमाडौंबीचको सम्बन्धमा सीमावर्ती क्षेत्रको प्रभाव घट्नु शक्ति क्षयकै सूचक हो । जतिखेर सीमावर्ती सम्बन्धलाई काठमाडौंले आत्मसात् गरिरह्यो, दिल्लीसँगको संवादमा राजनीतिक पक्ष प्राथमिक रह्यो । तर जब त्यो इग्नोर हुन पुग्यो, दिल्लीका कर्मचारीतन्त्र हाबी भए । सीमावर्ती–मानसलाई कुल्चिन खोज्नु वर्तमानमा नेपाली राजनीतिको नयाँ स्क्रिप्ट भएको छ । निश्चय नै नेपालमा भारतको सामरिक र आर्थिक स्वार्थ छ । तर भारतीय स्वार्थ पूरा गर्ने सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दा हुन् भन्ने कुरा नितान्त गलत हो ।
नेपालभित्रको राजनीतिक हानथापमा बेलाबखत यस्ता संकथनहरूलाई मलजल दिइन्छ, जसमा सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूको देशभक्तिमाथि प्रश्न गरिएको हुन्छ । सीमाभन्दा टाढा रहेका बासिन्दाहरूमा राष्ट्रवादको मात्रा बढी छ भनेर अर्थ्याइन्छ । काठमाडौं–दिल्लीमा मञ्चन भइरहने साँप सिँढीको सत्ता खेलले बदलिएको परिस्थिति र फैलिँदो केन्द्रीयतामा आफूलाई कसरी सान्दर्भिक बनाउने भनी गम्भीरतापूर्वक घोत्लिने काम सुरु भएकै परिणाम हो, सीमाञ्चल अवधारणाको विस्तार । आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो भने जस्तै सीमाका दुवै मुलुकका बासिन्दाहरूको सेवा, सुविधा, सम्मान र समुन्नतिका लागि ‘सीमाञ्चल’ अवधारणा निर्माण गरिएको हो ।
सीमाञ्चल भनेको त्यो क्षेत्र हो, जो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाले विभाजित रहे पनि जसको वर्तमान र भविष्य अविभाज्य छ । सोझो अर्थमा सीमावर्ती क्षेत्रका पारस्परिक आयाम जसले केन्द्रभन्दा पृथक् अस्मिता राख्छ । कतिपय सामाजिक, आर्थिक र सुरक्षा चुनौतीहरू समान छन् । यस क्षेत्रमा दुवै मुलुकको जनसंख्या थिग्रिएको छ । अभाव, गरिबी, पछौटेपन, सामाजिक विसंगति, निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रको अभाव, बेरोजगारी, पलायन, भूस्खलन वा माटोको बालुवाकरण, जल संकट, रित्तिँदै गरेको गाउँ, विषादीको अत्यधिक प्रयोग जस्ता समस्या दुवैतिर छन् ।
मूल्यान्तरको लाभ लिने एउटा संगठित समूह बाक्लिँदै छ । बोर्डर इकोनोमी, बोर्डर टुरिजमभन्दा सीमापार अपराधले बढी चर्चा पाउँदै गरेको छ । सीमाञ्चलमा दुवैतर्फका प्रदेश सरकारहरू सामञ्जस्य गरी समाधानमुखी योजना बनाउने विषय तत्काल सम्भव छैन । छिमेकी बिहारमा रक्सी निषेध नीति छ । यता दशगजामा समानान्तरमा रक्सी बजार फस्टायो । यता मधेस प्रदेशमा भूमिगत जलको सतह गहिरिँदै गएको छ, उता बिहार सरकारले नलजल योजना ल्याएर निकै गहिरो बोरिङ गाड्ने योजना ल्याएको छ । आपसमा विरोधाभासयुक्त यस्ता योजनाले कालान्तरमा दुवैतर्फका जनतालाई नोक्सानी पुर्‍याउँछ ।
कोरोनाकालमा महामारीको संक्रमण छल्न बोर्डर सिल गरियो । त्यसैताका कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमणको विषय उठ्यो, नेपालका सबै राजनीतिक शक्तिले ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गरे । यहाँ उठाउन खोजिएको विषय के हो भने, विभिन्न निहुँमा सीमामा नागरिक व्यवस्थापनको साटो सुरक्षातन्त्र हाबी गरिँदैछ । खुला सीमा भनिए पनि सहज आवागमन छैन । पछिल्ला वर्षहरूमा दिल्लीसँगको सम्बन्ध चिसिँदा कतिपय बेला दुवैतर्फका राजनीतिकर्मी र मिडियाको गतिविधिले संवाद प्रवर्द्धनको साटो विष छर्किने काम गरे, जसले भुइँ तहका सम्बन्धमा खालीपन देखियो । उसो त चाँडै नै जनस्तरको सम्बन्ध लयमा फर्कियो । यो नै सीमाञ्चल सम्बन्धको सौन्दर्य हो । दिल्ली र काठमाडौंले यो बुझ्नुपर्छ, बुझ्ने चेष्टा गर्नुपर्छ ।
उत्तराखण्डका पत्रकार भूपेन सिंह, उत्तर प्रदेशका मनोजकुमार सिंह हुन् वा सिक्किमका जोसेफ लेप्चा— सबैले स्विकार्छन्, सीमाञ्चल सम्बन्धका पारम्परिक आयाम संकुचित हुँदैछन् । सूत्रहरू चुँडाइँदै गएको छ । यस्तोमा सूचना, सम्पर्क र संवादको सघन व्यवस्थापन गर्न ढिलो गर्नुहुन्न । सीमामा खटिएका सुरक्षा सञ्जाललाई अब फिर्ताबोलाउन दुवै मुलुकलाई गाह्रो छ । तर तिनलाई नागरिकमैत्री बनाउन सम्भव छ ।हाम्रो नीति निर्धारण प्रक्रियामा यो मननयोग्य विषय हुनुपर्छ ।
अहिले त केही सीमित भन्सार नाकाहरूमा लट्ठा (ढाठी)को छेकबार छ । नागरिकमैत्री बनाउन ढिलो हुँदै गयो भने एकअर्का मुलुकलाई लट्ठा पारको देश भनेर चिन्ने दिन आउँछ । त्यो भनेको सीमाञ्चल सम्बन्धको समाप्ति हो ।
प्रकाशित : वैशाख ७, २०७९ १३:०९